सावधान, आईएनजिओका दलाल र गुलामहरु हो !
अप्रिल २०, २००९
-सरोजदिलु विश्वकर्मा यहाँ वाहुनवाद भन्नाले न ब्राम्हण जाति, न त कुनै ब्यक्ति विशेषलाई नै इंगित गर्न खोजिएको हो । त्यर्सथमा, दलित महिला, मधेसी, जनजाति, क्षेत्री र स्वयं ब्राहृमणका दिमाग भुटेर आफूचाहि फायदा लुट्दैछन्, जोजोहरु वौद्धिक विलासीतामा राज्य,...
अप्रिल १९, २००९
-दलु पुन, ईराक यौन एक प्रकारको विधा हो । एक प्रकारको कला हो । तर यो कसैलाइ सिकाउनु पर्दैन । यो प्राकृतिक देन हो । भगवान को उपहार हो । किराकिरी, चराचुरी जनावर र मानिसलाइ...
नयाँ नेपाल, हाम्रो नियती र नयाँ वर्ष
अप्रिल ११, २००९
“जङ्गली राजनीतीको सारथी बन्दासम्म सम्मुनत नयाँ नेपालको स्वर्णिम सपना देख्नेहरु सिंहदरबार छिर्ने बित्तिकै आफुलाई संसार जितेको ठानेर नयाँ ब्यक्तिगत जीवनको नयाँ अनुभूतिकासाथ सबै कुरा बिर्सेंर लट्ठ पर्नु स्वार्थको पराकाष्ठा हो ।” -गणेश खड्का “प्रतिक्षा” ” मेरा...
बन्दूक बोक्दै ईराकमा नेपाली
अप्रिल ७, २००९
यस्तो लाग्छ-नेपालीको नियती नै बन्दूक बोक्ने हो । स्वदेशमा जनयुद्दका नाममा दशक भन्दा बढि बोके । अझै पनि बिभिन्न दल र समूहका नाममा नेपालीहरुको काँधबाट बन्दूक छुटेको छैन । बेलायती गोरखाली सेना र भारतिय सेनमा त पुरानै...
नेपाली मिले गाह्रो छैन प्रगती गर्न
फ्रेब्रवरी २६, २००९
-रवीन शर्मा ओली (नेपाली ब्यवसायी) पेरिस, फ्रान्स म पेरिसबाट ४०, ४५ किलोमिटर टाढा बस्छु । इभ्री भन्ने ठाउँमा मेरो एउटा रेस्टुरेन्ट छ समा दिमालय (हिमाली मार्ग) भन्ने । । त्यसले ठ्याक्कै भन्ने हो भने साँच्चिनै नेपालको प्रतिनिधीत्व गरेको...
रूई, फुई, कि दुई…….
जनवरी १४, २००९
-गणेश खड्का “प्रतिक्षा” यी तीन जाडो छल्ने अचुक औषधी हुन् । रसियाको साइबेरियालगायत यूरोपका बिभिन्न मुलुकबाटबाट जाडो छल्न भू-मध्यरेखिय हावापानीतिर बतासिन्छन कर्‍याङकुरुङहरुपनि । हिमाली प्रदेशका तन्नेरी बसिन्दाहरु आफ्ना भन्ट्याङ भुन्टुङका साथमा मधेशतिर झर्छन् । काँचो लाहा,...
हात्ती पोलो: जति फुच्चे उति तगडा
डिसेम्बर ५, २००८
-रुपेन्द्र कर्माचार्य (तस्बिरपनि) रत्ननगर, टाँडी आफु नखेले पनि मलाई खेल हेर्न भने खुब मन पर्छ । मेघौलीमा विश्व हात्ती पोलो प्रतियोगिता भैरहेको थाहा पाएँ । के खोच्छस् कानो आँखो, म मेघौली तिर हुइकिएँ । म त्यहाँ...
गाउँ हेर्दै परदेशी संझिदा रोएको मन
अक्टोबर २८, २००८
-रुपेन्द्र कर्माचार्य, रत्ननगर, चितवन आज म त्यस ठाउँमा पुगें, जहाँ म संधै पुग्थें । सुन्दा अचम्म लाग्ला । मेरो बिहान सबेरै उठेर दौडने बानी छ । टाँडी बजारबाट दक्षिण तर्फजाने पक्की बाटो हुँदै लगभग ४ कि.मी. दौडेर...
दिपावली क्षितिजपारि….अनुभुति र सम्झनामा
–सूर्य प्रसाद न्यौपाने “सिकारु” “हैन कति तास मात्र खेलेको भन्या, टिकाको लागि तयार हुनु पर्दैन। यस्तै हो भने त म अबदेखि आउदिन नि टिका भनेर उति टाढाबाट” । ‘ओहो, मेरो मायालु बहिनि त सारै रिसाए...
यस्तो छ बर्मुडाका नेपालीको कथाब्यथा
अगस्ट ११, २००८
[बर्मुडा भन्ने देश सुन्नु भएको छ ? कहाँ होला त्यो फुच्चे देश ? कति होलान त्यो टापू राष्ट्रमा नेपाली ? र ति के गर्दै होलान ? त्यस्तो टापूमा कुन नेपाली होला पहिले पुग्ने ? के कसरि दिन...